Barlamaanka oo su’aalo weydiinaya wasiirka Arrimaha Gudaha – Radio Muqdisho
Barlamaanka oo su’aalo weydiinaya wasiirka Arrimaha Gudaha
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo fedaraalka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta uu hortago Barlamaanka Soomaliya si ay su,aalo uga waydiyaan guddiyadii doorashooyink a iyo xuduudaha oo ay soo diyaarisay wasaaradda.
Hab-dhowraha barlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo waraysi siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maanta mudanayaash barlamaanka su’aalo la xiriira shaqada wasaaradda arrimaha gudah iyo federaalka ay waydiin doonaan wasiirka Arrimaha gudaha oo la filayo inuu barlamaanka horyimaado maanta.
Kulanka Barlamaanka ayaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa” waxa uu ku soo bandhigi doonaa guddiyo Madax bannaan oo kala ah Guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka oo horay ay u soo ansixiyeen Golaha wasiirrada Xukuumadda mudane Cumar Cabdirashiid iyada oo Arrimahaas su’aalo ay ka waydiin doonan xildhibannada Barlamanka federaalka Soomaaliya Wasiir “Odawaa”.
Xildhibaan Maxame Cumar ayaa sheegay in Ajandahaas uu yahay mid ka ugu muhiimsan ee kulanka barlamaanka maanta.
Mudanayaasha barlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mudooyinkaan waxaa horimaanayay wasiirro ka tirsan Xukuumadda iyaga oo wasiirwalba waydiinayay qorshaha shaqo ay wadaan iyo faa’iidada Qaranka ugu jirta howshaas ay wadaan wasaaradaha qaarkood.
Tartamayaasha Degmada Heliwaa oo u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka “Dhageyso”
Ciidammadda AMISOM iyo kuwa Dowladda oo lawareegay Leego